March 11, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'March 11th, 2017'
Markab Weyn oo Maanta ku soo Caariyay Nawaaxiga Dekedda Magaalada Muqdisho (Dhagayso)
March 11, 2017 – Waxaa maanta xeebta nawaaxiga Dekadda magaalada Muqdisho ku soo caariyay markab weyn oo sida la sheegay siday shixnad ganacsi, iyo konteenaro waaweyn, arintani ayaa dhacday kadib markii ay mowjadaha badda iyo dabaylo xoogani ka tanbadiyeen markabkaasi. Dad goobjooga ayaa warbaahinta u sheegay in ay weli socoto badbaadinta Markabkaasi, waxaana hadda badbaadinaya …
Darbiga Laga Dhisayo Xadka Kenya oo Kala Qaybin Doono Soomaalida Kunool Xadka Labada Dal (VIDEO)
March 11, 2017 – Dalka Kenya ayaa weli wada qorshe lagu dar dar galinayo dhismaha darbiga laga dhisayo xadka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya wadaagaan, Kenya ayaana aaminsan in dhismaha darbigan uu yareenayo weerarada dagaalyahanada Al Shabaab ka geysanayaan gudaha dalka Kenya. Derbigan laga Dhisayo xadka labada dal ayaa waxa uu saamaynta ugu xoogan …
Derbiga Xadka Kenya iyo Soomaaliya (VIDEO)
Wakiilka Midowga Africa ee Soomaaliya Francisco Madeira, ayaa ku baaqaya in la kordhiyo ciidamada Amisom, si dowladda cusub ee Soomaaliya iyo ciidamadeeda amniga gacan looga siiyo inay la wareegaan ilaalinta amniga goobaha horey looga xoreeyey urur Al-Shabaab. Shacabka ku nool deegaanadaasi ayaa ka walwelsan hadii derbigaasi la dhamaystiro inay arki doonaan dadkooda oo ku nool …
Nabadoon Xarago oo Maanta Laga sii Daayay Xabsiga magaalada Boosaaso
March 11, 2017 – Maamulka Puntland ayaa maanta xabsiga ka sii daayey Nabadoon C/qaadir Ibraahin Xarago oo labo Isbuuc iyo bar ku xirnaa xabsiga Magaalada Boosaaso, kadib markii lagu eedeeyeen inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab. Odayaal ay isku reeryihiin Nabadoon Xarago ayaa muddo wada hadal la lahaa Madaxweynaha Puntland Cabdi Wali Maxamed Cali “Gaas”, …
Ra’isal Wasaaraha Soomaaliya oo Maanta Dhagaxdhigay Xarun Cusub oo loo Dhisayo Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha (Dhagayso)
March 11, 2017 – Ra’isal Wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa Maanta si rasmi ah u dhagax dhigay xarun cusub oo ay yeelan doonto hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha ee Soomaaliya. Xaruntan cusub ayaa waxaa lagu wadaa inay ku shaqeyso Hay’adda Socdaalka iyo hay’adaha yar yar ee hoosyimaada, waxaana Xaruntaan ay noqoneysaa Xaruntii ugu weyn …
Hogaanka Amisom oo Sheegay in Ciidamada Soomaaliya aysan Hanan Karing Amnihga Goobaha la Xoreeyo (VIDEO)
March 11, 2017 – Hogaanka Ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee Amisom Mr. Francisco Madeira ayaa qirtay in qorshaha iminka loo dejiyay ee ah weerarada milatari ee ka dhanka ah Al-Shabaab ay suurtagal tahay inuusan ku guuleysan hadafyada laga leeyahay ee ah inuu Soomaaliya u horseedo xasilooni waarta. Wakiilka Midowga Africa ee Soomaaliya Francisco Madeira, …
Kulankii Hogaanka Amisom (VIDEO)
Wakiilka Midowga Africa ee Soomaaliya Francisco Madeira, ayaa ku baaqaya in la kordhiyo ciidamada Amisom, si dowladda cusub ee Soomaaliya iyo ciidamadeeda amniga gacan looga siiyo inay la wareegaan ilaalinta amniga goobaha horey looga xoreeyey urur Al-Shabaab. Francisco Madeira ayaa sheegay in Amisom waligeed aysan sii joogidoonin dalka Soomaaliya, loona baahanyahay in la dhiso ciidamo …